Harting njikọ: ihe ị chọrọ ịma banyere ndị a njikọ | Akụrụngwa n'efu
Ikekwe ị nụla banyere ya Harting njikọta ọ bụ ya mere na ị bịara n'isiokwu a na-achọ ihe ọmụma, ma ọ bụ ikekwe ị chọpụtala ya na mberede. Ma na otu ikpe na nke ọzọ, lee, m ga-anwa ịkọwa ụfọdụ banyere ụdị njikọ a na ngwaahịa ndị kachasị amasị.
Ha bụ ndị ama ama na ulo oru na injinia ngwa, ma ha nwere ike ịba uru maka ụfọdụ ndị na-eme ya na ọrụ ha DIY Arduino. Ọ bụ ya mere ị kwesịrị iji matakwuo banyere ihe Harting nwere ike iwetara gị ...
Ozi ndị ọzọ gbasara ihe ndị ọzọ gbasara kọmputa nwere ike ịmasị gị maka ọrụ gị ebe a.
1 Banyere Harting
2 Harting Han njikọ
2.1 Han njikọ ụdị
3 Ebee ka ịzụta ngwaahịa Harting?
Harting na-agba ịnyịnya bụ ụlọ ọrụ nke Wilhelm na Marie Harting guzobere na 1945. Ihe niile malitere dịka obere ụlọ ọrụ na-arụzi ụgbọala dị naanị otu narị square mita, na ụlọ nrụzi dị na Minden, Germany. N'ebe ahụ ka ha malitere imepụta ụfọdụ ngwa elektrọnik maka iji ya kwa ụbọchị, dị ka ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ nri eletriki, akụrụngwa maka ogige ọkụ, igwe waffle, ọkụ eletrik, akwa akwa, wdg.
Wilhelm Harting ghọtara na ụlọ ọrụ German chọrọ ngwaahịa teknụzụ, ya mere, ọ gbara mbọ site na mmalite iji mepụta ngwaahịa ndị a ma zute ihe mgbaru ọsọ ha na ịdị mma na ihe ọhụrụ. Ekelere ngwaahịa ha nke ukwuu maka rsturdiness, ịdị mfe nke iji na egosipụta ọtụtụ. N'ezie, nkà ihe ọmụma Harting gosipụtara na otu okwu nke Wilhelm: 'Achọghị m ka ngwaahịa laghachi".
Mgbe Ọnwụ Wilhelm na 1962Marie Harting malitere ịchịkwa ụlọ ọrụ ahụ nwa oge, rue mgbe ụmụ ya nwoke abụọ bụ Dietmar na Jürgen Harting weghaara ya. Na 1987, Margrit Harting ga-esonyekwa di ezinụlọ diet Dietmar, ugbu a bụrụ otu n'ime ndị ọchụnta ego. Taa, Philip FW Harting na Maresa WM Harting-Hertz bụ ọgbọ nke atọ n'isi otu ụlọ ọrụ a ma ama ...
Mgbe ha mepụtara ụdị ngwaahịa ọ bụla, ha kere Han njikọ, ika Harting nke nwere nnukwu ihe ịga nke ọma n'ahịa ma guzosie ike dị ka ụkpụrụ zuru ụwa ọnụ. Akụkụ a ghọrọ isi ahịa ahịa maka otu teknụzụ niile.
Nke nta nke nta ka ọ toro n'ọnụ ọgụgụ ndị otu na ahịhịa na-emepụta ihe, ọganiihu ma ọ gachaa nke ọma. Ugbu a ha nwere 14 mmepụta osisi na ebe iri atọ na atọ ahịa gburugburu ụwa. Ugbu a, ha eguzobewo onwe ha dị ka otu n'ime ndị na-enye ndị na - eweta ụzọ maka njikọ njikọ ụlọ ọrụ maka data, mgbaama na ike.
Na mgbakwunye na njikọta, ụlọ ọrụ na-arụpụtakwa ihe ndị ọzọ,
Harting Han njikọ
Otu n'ime ngwaahịa kpakpando ya, dịka m kwuru, bụ Han njikọ by Harting. E nwere ọtụtụ dịgasị iche iche na ha mara site na ịdị mfe ha na njikwa ngwa ngwa, ike ha na-enye, ngbanwe nke iji, usoro ndụ na-adịte aka, yana ohere nke nzukọ na-enweghị iji ụdị ngwaọrụ ọ bụla.
Nke ikpeazu bu dị ezigbo mkpa, ebe ọ bụ na ọtụtụ njikọta dị na ụlọ ọrụ ahụ, ma maka iji ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ maka ojiji ọ bụla, na-egosi mgbe ụfọdụ iji ụfọdụ ngwaọrụ maka ntinye ha.
Na mgbakwunye na ihe niile, njikọ Harting Han abụwokwa echekwara (IP) nke mere na o nwere ike iguzogide ụfọdụ ọnọdụ mpụga nke iru mmiri, uzuzu, ahụ ndị si mba ọzọ, ihe egwu igwe, mmiri wụfuru, wdg. N'ezie, a na-agbachitere nchebe n'okpuru ụkpụrụ IEC 60 529 na DIN EN 60 529.
Ozi ndi ozo banyere Han na ngwa
Han njikọ ụdị
Ndị njikọ njikọ ụlọ ọrụ Hartig Han a Ezubere iji mezuo ihe niile ụlọ ọrụ mmepụta ihe chọrọ, ahia, oru ugbo, maka iji ya noo, na ihe ndi ozo. All ekele ya mfe nzukọ na n'ibu, eletriki na nchebe megide ndị ọzọ na mpụga ọnọdụ.
A na-ekewa njikọta Hartin dị ka ngwa ha si dị, ọnụ ọgụgụ nke okporo osisi, voltaji na nkwụsi ike ugbu a, na-akọwapụta ihe ndị a ụdị:
Ha nwere ọdụ ụgbọ mmiri
Han Push sere
N'ozuzu, ha nwere afọ ojuju na ihe ndị dị ka mkpuchi na isi, na mgbakwunye na inwe dịgasị iche iche ma ha dị oke nwoke ma obu nwanyi, maka ụdị mgbakọ dị iche iche. Ma n'ezie Harting nwekwara ụdị ngwa mgbakwunye niile dị iche iche dịka eriri, igbe, akwa akwa, wdg.
Ebee ka ịzụta ngwaahịa Harting?
Ị nwere ike zụta njikọta ndị a na ngwaahịa ndị ọzọ Harting dị iche iche ọpụrụiche na-echekwa, na-na ụfọdụ online saịtị na-ere ha. Ọnụahịa ha dị iche iche dabere n'ụdị ngwaahịa a họọrọ, mana nke a bụ ụfọdụ isi:
Harting 10m Ethernet nwoke njikọ
Harting IDC njikọ maka PCB - Pack nke 3 nkeji
Onye omekome maka Harting Han D, S na C
Harting D-Sub maka ịgbanye na PCB ma ọ bụ maka oghere
Harting Series nkwụnye 25 pin
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ihe eletrọniki » Harting njikọ: ihe ị chọrọ ịma